Double germinales chiutsi Water Bath dzinodzikinyidza Sterilizer - China Qingdao rakadzikama Machinery
The Double germinales chiutsi Water Bath dzinodzikinyidza Sterilizer inoshandiswa chenesa nezvokudya. Pane mvura kugeza mhando, mvura pfapfaidzo mhando, uye mvura hwemvura mhando kuti sarudzo maererano zvokudya pasuru mhando. Kazhinji muchina adopts kaviri tangi inopisa mvura marara kuti chenesa. It preheat inopisa tangi mvura kuti sterilizing tembiricha, kuatapudza chenesa nguva. Zvokudya kugadzira dzinodzikinyidza autoclave tembiricha iri kumusoro kutanga, kudzivirira zvigadzirwa yepamusoro.
Mushure sterilizing, inopisa mvura Kuzvigadzira Patsva kuti kukwira tangi, ari kushanda svikiro anogona bikurudza kushandiswa, achiponesa chiutsi, simba, uye sterilizing nguva. Saka nemiwo kuponesa manpower uye zvinhu resources.The kaviri akaturikidzana kugeza hwemvura mvura dzinodzikinyidza sterilizer temperature is even, water flow is even, there’s no dead space in the tank.The water spraying autoclave machine adopts most advance computer control system in the world.The full progress is fully computer controlled by PLC, one time finish, no need man operation.The PLC can store more than 100 pcs sterilizing programme. The sterilizing is standardization.
Adopts tembiricha diaphragm vharafu, otomatiki chinja tembiricha iri tangi.
Toredzera yakakwirira kunyatsoshanda kupisa exchanger, chete kwemaminitsi anoverengeka vanogona kuenda mbereko tembiricha.
All vharuvhu inozarurwa inotongwa kombiyuta.
The miviri akaturikidzana hwemvura kugeza nemvura dzinodzikinyidza sterilizer adopts guru kubata chidzitiro, guru vanoratidza kuti sterilizing chekubuda.
muchina ose anogona kuenzana Fo valume kudzora hurongwa.
Simulation tembiricha kuzvidzora hurongwa, unogona kuisa Multi Danho kudziyisa.
The miviri akaturikidzana hwemvura kugeza nemvura dzinodzikinyidza sterilizer chafariz vakapararira iri kunyange, unhu kuzvidzora zviri nyore.
Double akaturikidzana kugeza nemvura dzinodzikinyidza sterilizer wakanaka nyoro pasuru zvigadzirwa, kunyanya nokuda guru pasuru, kupisa pinda kumhanya ndiko kutsanya, mbereko mugumisiro kana zvakanaka.
The Stainless simbi zvokudya kubudiswa mvura spraying mbereko muchina anogona kudhinda uye chitoro nguva, tembiricha, kumanikidza munyonga mepu.
Metal mudziyo: Tin nyaya, aruminiyamu anogona, uye negirazi
Soft pasuru: Aluminum foil bhegi, mukuru tembiricha dzinodzikinyidza homwe, Vacuum hombodo, segirazi bhegi
Plastic Container: PP bhodhoro, HDPE bhodhoro
Cocoa upfu mbereko muchina
hove chikafu kubudiswa muchina
zvokudya upfu mbereko muchina
zvokudya mbereko midziyo
maindasitiri chikafu mbereko muchina
Jam mbereko muchina
Mini chikafu dzinodzikinyidza muchina
Pet Food mbereko Machine
dzinodzikinyidza chikafu kubudiswa
soseji mbereko muchina
duku autoclave chikafu sterilizer
chiduku uht mbereko muchina
Chiutsi Fish zvomumagaba Food mbereko dzinodzikinyidza
hwemvura sterilizer mutengo
talcum upfu mbereko muchina
Three Pot Parallel Type Food Processing dzinodzikinyidza ...